Kayd.org » Blog Archive » Bandhigga Buugaagta Cusub ee Af Soomaaliga lagu daabacay- Toddobaadka Fanka iyo Dhaqanka
Ismaaciil A Ubax
Cabdiraxmaan M Abtidoon
Cabdalla Cismaan Shafey
Ismaaciil Cabdillaahi Ubax waa qoraa da’yar oo soo saaray buuggiisii labaad ‘Indhadeeqey ku aaway?’ (2016) kaas oo lagu soo wareejiyey Yurub iyo Somaliland. Sheekadii koobaad ee uu qoray ee ‘Maxaan galabsadee la iga goynayaa’ (2013) ayaa iyaduna ka mid ah sheekooyinka Soomaaliga ku qoran ee aad ka loo akhristo.
Rashiid Gadhwayne iyo Sheekh Dalmar
Maxamed Xirsi Guuleed “Abdibashir”
Cabdalla Cumar Mansur
Baresare Cabdalla Cumar Mansuur ayaa soo jeedin doona daabacaad danbe oo uu ku sameeyey buuggiisii ‘Taariikhda iyo Luuqadda Bulshada” oo ay imminka daabacday shirkadda Looh Press. Daabacaadan cusub waxa lagu soo daray cutub ka hadlaya Luuqad yaqaanada Geeska Afrika, khariirado iyo tusmo.
Maxamed M. Cabdi “Haykal”
Siciid Jaamac Xuseen ayaa akhriyi doona daabacaadda labaad ee buuggiisa Sheekooyinka gaagaaban ee ‘Safar aan jiho lahayn’. Daabacaadan cusub ee dib loo qaabeeyey waxa lagu soo sheekooyin cusub oo qeexaya “sawirro” cusub ee khibradda socdaalada qoraaga.
Cabdalle Cismaan Shafey wuxuu jeedin doona buuggiisa cusub ‘Doorka waalidka ee waxbarashada carruurta’. Sidoo kale waxa uu soo bandhigi doonaa buug uu la qorey Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo lagu soo ururiyey ku ururiyey erey xisaabeedyada oo ku qoran Afsoomaali.
Qorayaasha kale ee soomaalida ee ay ka mid ka yihiin Maxamed Xirsi Guuleed oo ku nool dalka (Sweden), Cabdiraxmaan Abtidoon oo isna ku nool dalka (Norway), Jawaahir Daahir (UK), Saynab Dahir (UK),Maxamed M. Cabdi “Haykal” (UK) iyo Muuse Dalmar oo isaguna ku nool dalka (Sweden), ayaa waxay soo bandhigi doonaan hawlaha qoraannimo ee ay qabtaan halkaas oo ay dhagaystayaasha iyo shirkadaha daabacadaha ee ku yaal Europe iyo Geeska Afrika xog isku waydaarsan doonaan. Dooda furan ee bandhiga waxa ka qayb ah shirkadaha daabacaadaha (Looh Press, SomaliBooks.com), waxaana diirada lagu saari doonaa caqabadaha iyo fursadaha ay soo kordhiyeen shirkadahan wax ku daabaca Afsoomaaliga.
Daalcasahada buugta iyo gadashadooduba way furnaan doonaan maalinta oo dhan qorayaashuna waxay u saxeexi doonaan da
This entry was posted on Monday, September 5th, 2016 at 2:57 am	and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.